Manafatra hazo maharitra hahatratrarana tanjona azo havaozina | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | | Biomassa, Angovo azo havaozina
La Vondrona Eoropeana nametraka tanjona ho an'ny famokarana angovo azo havaozina avy amin'ny biomassa ho an'ny taona 2030. Ity angovo ity dia handrakotra ny ampahany amin'ny fangatahana angovo eropeana amin'ny fampiasana fako biolojika amin'ny asa atao amin'ny ala sy ny fiompiana.
Fanadihadiana vao haingana nataon'i Birdlife Europe sy fitaterana & tontolo iainana tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, dia nanambara fa ny fako amin'ny hetsika maharitra izay mifandraika amin'ny biomassa dia handrakotra azy fotsiny farafahakeliny 80% amin'ireo vinavina napetraka avy amin'ny EU tamin'ny 2030. Inona no azon'ny EU atao amin'izao toe-javatra izao?
Tamin'ny volana oktobra lasa teo, nanaiky ny hampisondrotra ny habetsaky ny angovo azo havaozina vokarin'ny UE amin'ny alàlan'ny mifangaro mahery. Ny tanjon'ity fanoloran-tena ity dia ny hampihenana ny fandotoana mandoto hanohitra ny fiovan'ny toetr'andro. Izy ireo koa dia mikasa ny hampihena ny fiankinan-doha amin'ny solika fôsily. Natao farafaharatsiny mba hampiasana azy io amin'ny 2030 27% angovo azo havaozina bebe kokoa.
Tahaka ny biomassa ampiasaina bioenergy (Ny bioenergy dia angovo azo havaozina azo avy amin'ny fako velona) izay manarona ny 80% fotsiny no kasaina hatao, miaro ny ekolojianina fa ny ambiny dia tokony omena amin'ny alàlan'ny fanafarana vokatra maharitra hazo sy sakafo avy any ivelan'ny sisintanin'i Eropa. Amin'izany no hanamaivanana ny tsy fahampiana angovo, tsy ho voatery iharan'ny fitsipiky ny EU izy ireo ary ho kely ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana.
Noho izany, ny EU dia tsy maintsy terena hanafatra ny fako biolojika rehetra zezika omby sy fako hazo mba hahatratrarana ny fetra famokarana angovo azo havaozina napetraka amin'ny 2030. Izany no antony 30 novambra ho avy ny famerenana ny torolàlana momba ny angovo azo havaozina nomen'ny Vaomiera eropeana. Ity fenitra ity no resa-politika lehibe indrindra amin'ny fampiasana bioenergy manerana an'i Eropa.
Ny zezika dia ampiasaina hiteraka angovo azo havaozina
Raha ny fanadihadiana natao nataon'ny biolojista dia tamin'ny taona 2014 no nisolo tena ny bioenergy 64,1% amin'ny famokarana angovo azo havaozina rehetra any EropaNa izany aza, nilaza fotsiny izy ireo fa amin'ny 2030, ny bioenergy dia mety hahatratra 30% fotsiny amin'ny fangatahana angovo ao amin'ny EU.
Noho ny zava-misy fa ny fitantanana fako any amin'ny EU dia miha mahomby sy manatsara isan'andro, ny fisian'ny fako biolojika hahafahana mamokatra angovo hihena mandritra ny taona maro. Etsy ankilany, fandoroana harena voajanahary ny fandoroana amin'ny famokarana bioenergy. Ity hazo ity dia tokony hampiasaina voalohany amin'ny fanamboarana fanaka, taratasy, trano ary ho an'ny indostrian'ny fonosana.
Jori sihvonen, dia tompon'andraikitra amin'ny bioenergy amin'ny Transport & tontolo iainana ary naneho hevitra toy izao:
"Tokony hametra ny fampiasana bioenergy i Eropa ary hanokana ny ezak'izy ireo hampiroborobo ny fampiasana maharitra ny angovo azo havaozina, anisan'izany ny angovo azo avy amin'ny masoandro, rivotra, geothermal ary ny fisondrotry ny onja"
Ny famakafakana ny zava-mitranga, raha mamporisika ny fitomboan'ny bioenergy bebe kokoa ny Renewable Energy Directive fa tsy mampiroborobo ny angovo hafa, dia hampirisika hatrany ny fampiasana bioenergy tsy maharitra io, ka tokony hitarika amin'ny fanafarana hazo.
Raha fintinina, ny Birdlife Europe sy ny Transport & tontolo iainana dia samy niantso ny Vondrona eropeana mba hamolavola fitsipika maharitra momba ny bioenergy. Ilaina ny famatsiana maharitra mba hahafahana mamorona bioenergy, raha tsy izany tsy mitombina ny fiantsoana azy io ho angovo azo havaozina. Ny hazo dia tsy maintsy avy amin'ny ala maharitra. Ny biofuel sasany ampiasaina ankehitriny dia mifototra amin'ny sakafo sy fandoroana hazo izay ratsy lavitra noho ny famokarana angovo misy solika fôsily, ka izany no antony nanatontosana izany rehetra izany ho amin'ny tanjona maharitra kokoa. Ny politika dia tokony hanilika ny fampiasana ny voly sy ny fambolena mba hiteraka angovo hahafahana manome toerana ho an'ny karazan-javamaniry maharitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Manafatra hazo maharitra hahatratrarana tanjona azo havaozina ao amin'ny UE
Nahoana no tena zava-dehibe amin'ny olombelona ny tantely?